चुम्बन गर्दा शरीरमा कस्तो प्रभाव पर्छ ?
Wed, Oct 23, 2019 at 11:11pm
श्रीलङ्कामा राष्ट्रपतीय निर्वाचनका लागि उच्च सुरक्षा सतर्कता #आहा खबर# दोहोरो नागरिकताको आरोप लागेका कँडेलले पत्रकार सम्मेलनमा के भने ? #आहा खबर# अन्तर्राष्ट्रिय युवा वैज्ञानिक सम्मेलन : विज्ञान प्रविधिको विकासका लागि ‘अनुसन्धान कोष’ स्थापना गर्ने सङ्कल्प #आहा खबर# सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई अघि बढाउन माग #आहा खबर# शहीदका सपना पूरा गर्नु साझा कर्तव्य– मुख्यमन्त्री गुरुङ #आहा खबर# सलमान खानको बहुप्रतीक्षित ‘दबंग–३’को ट्रेलर सार्वजनिक (भिडियो) #आहा खबर# नेपालमा चिनियाँ प्रभाव बढेको अमेरिकी भनाइको सरकारद्वारा खण्डन #आहा खबर# कुनै अलमलविना शान्ति, स्थिरता र सुशासनको बाटोमा : मुख्यमन्त्री राई #आहा खबर# संविधानको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायद्वारा सराहना : प्रधानमन्त्री ओली #आहा खबर# अठारौँ नाम सम्मेलनमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री ओली बिहीबार बाकु प्रस्थान गर्दै #आहा खबर# खारेजीमा परेका म्यानपावरको ठगी रोकिएन #आहा खबर# घुस लिएको आरोपमा समातिए प्रहरी #आहा खबर# तनहुँको ग्रामीण क्षेत्रको ३ सय ८८ घरधुरीमा बत्ती बल्यो #आहा खबर# गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको डिपिआर तयार #आहा खबर# धितोपत्र बजार : परिसूचक झण्डै आठ अङ्कले बढ्यो #आहा खबर#
मंगलवार, २४ आषाढ २०७६,	आहाखबर	2.82K
प्रेम संसारको सबैभन्दा सुन्दर कुरा जसको परिकल्पनाले मात्र पनि आनन्दको अनुभुति गराउँछ ।
प्रेम बिनाको जीवनमा मानिस बाँच्न त बाँच्छ तर उसको जीवनको कुनै अर्थ रहँदैन । त्यसैले प्रेम जीवन जिउनका लागि अति महत्वपुर्ण छ । जब कोहि प्रेमको गहिराईमा डुब्न थाल्छ, त्यो गहिराईमा दुई प्रेमिहरु आफुमा हराउन थाल्छन् ।
प्रेमको चरम सिमामा पुगेपछि प्रेमिहरु आफुलाई एक-अर्कामा सुम्पिन्छन् । उनीहरु चुम्बनमा लिप्त हुन थाल्छन् ।
चुम्बनले तपाईंको प्रेम जीवनलाई आनन्दित बनाउने मात्र नभइ यसले तपाईंको स्वास्थलाई पनि फाइदा पुर्‍याउँछ । प्रेममा आनन्द प्राप्तिको लागि गरिने चुम्बनले तपाईंको स्वास्थलाई पनि फाईदा पुग्छ भन्ने कुराले तपाईंलाई चुम्बनप्रति अझ सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ ।
यस्ता छन् चुम्बनका फाइदाहरु
- चुम्बनले टाउको दुखाइ कम गर्छ भन्ने मान्यता छ ।
- चुम्बन गर्नाले ब्लड प्रेसर कम गर्न सहयोग गर्छ ।
- चुम्बनले दाँतमा हुने क्याबिटीबाट बचाउँछ । चुम्बन गर्दा मुख धेरै चल्ने हुँदा क्याविटी युक्त ब्याक्टेरियाहरु सफा हुन्छन् ।
- चुम्बनले महिलालाई पीरियड्सको समयमा हुने दुखाईमा पनि राहत प्राप्त हुुन्छ ।
- चुम्बनले अनुहारको मासंपेशीलाई टोन गरेर अनुहार चाउरी पर्नबाट बचाउँछ
- चुम्बनले सेराटोनिन, अक्सीटसिन, डोपामाइन जस्ता ह्याप्पी हार्मोनहरुलाई बढाउने भएकोले तपाईंले रिफ्रेश र आनन्द अनुभव गर्नुहुन्छ ।
चुम्बनसँग सम्बन्धित रोचक तथ्यहरु
- वैज्ञानिकहरुका अनुसार हामी आमाको कोखमा हुँदा नै चुम्बन गर्न सिकिसकेका हुन्छौ ।
- केहि व्यक्ति चुम्बन गर्न डराउँछन्, जसलाई फिलेमाफोयिबा भनिन्छ । जसलाई यो फोबिया हुन्छ, त्यो व्यक्ति सेक्स गर्न पनि डराउँछ । त्यस्तो फोबिया कुनै पनि उमेरका व्यक्तिमा हुन सक्छ ।
- प्रशान्त महासागरका मौंगिया दीपका मानिसहरु कहिल्यै चुम्बन गर्दैनन् ।
- सुडानका मानिसहरु आत्मा हराउने डरका कारण चुम्बन गर्दैनन् ।
- चुम्बन गर्दा तपाईंको १४६ मांशपेशीले काम गर्छ ।
- चुम्बन गर्दा हाम्रो शरीरमा अफीम भन्दा २०० गुना धेरै प्रभाव पार्ने तत्व प्रसार हुन्छ ।
- बि्रटिश अध्ययनका अनुसार साँचो प्रेम पाउनका लागि महिलाले आफ्नो प्रेमिलाई १५ पटक चुम्बन गर्छिन् भने पुरुषले १६ पटक चुम्बन गर्छन् ।
चुम्बन एउटा सस्ंकृति
रोयल ह्यान्ड किस धेरै देशहरुमा औपचारिकता निभाउनका लागि गरिन्छ । पहिलो पटक भेट्दा होस् अथवा छुटिदा, यस प्रकारको चुम्बन गर्ने चलन रहि आएको छ । यस्तो किसिमको चुम्बनलाई शिष्टाचारको रुपमा लिने गरिन्छ ।
जसले तपाईको विनम्रता दर्शाउँछ । युरोप, अमेरिकासँगै खाडी देशहरुमा पनि यस्तो चलन अति नै लोकपि्रय रहिआएको छ । यदि कुनै व्यक्ति तपाईसंग रिसाएको छ भने उसले तपाईंलाई आफ्नो हात चुम्न दिँदैन ।
यस प्रकारको चुम्बनको प्रयोग विदेशमा विवाहको समारोहमा गरिन्छ । प्रायः हामी हलीउडका फिल्महरुमा यस प्रकारको चुम्बनको दृष्य देख्छौं । .जीवनभरी माया प्रेम गर्ने वाचासहित यो चुम्बन गरिन्छ ।
यस्तो प्रकारको चुम्बन यूरोपमा धेरै नै लोकपि्रय रहेको छ । यस्तो चुम्बनले आफ्नोपनको अनुभव गराउँछ । आफ्न्त, साथीभाईलाई हाइ अथवा बाइ गर्दा गालामा आफ्नो गाला जोडेर गरिने चुम्बन नै एयर किस हो । यस्तो चुम्बनको अर्थ तपाईलाई देखेर खुशी लाग्यो भन्ने हुन्छ ।
यस प्रकारको चुम्बनको प्रयोग जब कुनै ब्यक्तिलाई निद्राबाट उठाउनका परेमा, रुँदै गरेको व्यक्तिलाई फकाउन परेमा र कसैलाई विदाई गर्दा गरिने यो मयालु चुम्बनलाई एञ्जल किस भनिन्छ । यो चुम्बनको बिशेषता भनेका अगाडिको व्यक्तिलाई आँखामा बिस्तारै चुम्बन गर्नु हो ।
मौसम पूर्वानुमान महाशाखा : वर्षासँगै हिमपातको सम्भावना
जति सक्रिय मष्तिस्क, उति छोटो आयु ! कसरी बन्छ मस्तिष्क ?
मादक पदार्थ नियमित सेवन गर्नेभन्दा कहिलेकाहीँ पिउनेलाई धेरै असर
के घरमा बँचेको खानालाई फेरी तताएर खानु उचित हो ? के भन्छन् विज्ञहरु ?
तपाई कति रिसाउनु हुन्छ ? रिसको कुनै फाइदा छ ?
धनी बन्न चाहनुहुन्छ ? आजैबाट हटाउनुहोस् यस्ता बानी
आज पनि वर्षाको सम्भावना, यात्रामा सावधानी अपनाउन माैसम विद्काे आग्रह
कुन उमेरका मान्छे कति घण्टा सुत्ने ?
दसैंको मुख्य दिन मौसम गडबडै छ, तर आत्तिन पर्दैन : माैसम विद्
गाडीमा यात्रा गर्दा वान्ता हुन्छ ? यस्ता छन् वान्ता राेक्ने सरल उपाय
यस्ता छन् काँक्रो खानुका विशेष फाइदाहरु
खोकी निको पार्ने केही घरेलु उपायहरू ...
यस्ता छन् तकियामा सुत्नुका बेफाइदा
चाडपर्वमा कसरी सुरक्षित रहने ? नागरिकले अपनाउनुपर्ने उपायहरु यस्ता छन्
चाडपर्वको शुरुआत : पारि भीड, वारि सुनसान, थपिए ‘बीच बाटो’मै पसल
नियमित रुपमा 'ओखर' खानाले डिप्रेसनबाट पाईन्छ मुक्ति
सेनाका पाइला अब आर्थिक अनुशासन र लोकतान्त्रिकरणतर्फ...
मनसुन पुन: सक्रिय हुँदै, रातिदेखि वर्षाको सम्भावना
के चित्त दुख्नु हृदयघात बराबर हुन्छ ?
मनसुनी गतिविधि सक्रिय, दिनभर देशभर बलदी र वर्षा
यी अंगमा कोठी हुने मानिसको हातमा कहिल्यै टिक्दैन पैसा
जान्नुहोस् ! बिहे गर्न श्रीमान-श्रीमतीकाे उमेर अन्तर कति हुनुपर्छ ?
डन्डीफोरले सताएको छ ? यस्ता छन् समाधानका उपायहरु
शाकाहारीलाई हृदयरोगको जोखिम कम
भूतको फिल्म हेर्दा पनि स्वास्थ्यलाई फाइदा !
समस्याले सतायो ? यो फर्मूला अपनाउनुहोस्
आधुनिकतासँगै कुमाल समुदायको पुख्र्यौली पेशा सङ्कटमा
बेनी बजारमा फस्टाउँदै कौसी खेती : घरको छतमा लटरम्म तरकारी
शरीरको दुखाई कम गर्ने यी हुन् पाँच घरेलु उपाय
सुनको मूल्य ओरालो लाग्दै, यस्तो छ बजार
दोहोरो नागरिकताको आरोप लागेका कँडेलले पत्रकार सम्मेलनमा के भने ?
अन्तर्राष्ट्रिय युवा वैज्ञानिक सम्मेलन : विज्ञान प्रविधिको विकासका लागि ‘अनुसन्धान कोष’ स्थापना गर्ने सङ्कल्प
शहीदका सपना पूरा गर्नु साझा कर्तव्य– मुख्यमन्त्री गुरुङ